Ikhowudi eyiyo yesiPhuthukezi enepaprika kunye neetapile | Ukupheka kweKhitshi
Me encanta Photshugo, kwaye ngaphezu kwako konke, ukutya kwabo. Apho ungangcamla eyona khowudi imnandi emhlabeni. Nayiphi na iresiphi yekhowudi ilungiselelwe njengomnye umntu. Ke namhlanje bendifuna ukukubonisa le plate Ikhowudi kunye nepaprika, kumnandi kwisidlo sethu se IKrisimesi, Ingayinxalenye yemenyu etyebileyo yeKrisimesi kwezoqoqosho.
Kule recipe siza kuyisebenzisa ikhowudi etyhidiweyo. Ungazinqumla ngokwakho okanye uthenge izinqe sele zikwindawo efanelekileyo yetyuwa (ndizithanda ngokwam ezi zivela eMercadona). Ukuba ukhetha ukuwasusa itywina, kuya kufuneka ubenazo ubuncinci iiyure ezingama-48, utshintsha amanzi. 3 maxesha nokuyigcina efrijini.
Lumka, kwiresiphi asizukusebenzisa ityuwa kuba ikhowudi sele inetyiwa ngokwaneleyo.
Siza kudibanisa ikhowudi yethu kunye neetapile eziqhotsiweyo esiza kugqiba ukuzenza eziko.Ngaba uyafuna ukwazi ukuba le recipe ilandela njani?
1 Izithako (4p)
Iifayile ezi-4 zekhowudi
4 iitapile ezincinci
Umgubo (ukucola ikhowudi)
I-200 gr yeoyile yokuqhotsa
1 icephe enkulu yepaprika
50 ml yewayini emhlophe
50 ml amanzi
Ipiquillo pepper isikwe yimicu
Kubaluleke kakhulu ukuba ii-cod fillets zomile kakuhle. Ngenxa yoku sinokubayeka badle amanzi iiyure ezininzi emva koko sibomise ngephepha lasekhitshini.
Sinqumle iitapile njenge-omelette kwaye sigcina.
Sibeka malunga ne-200 gr yeoyile kwipani yokutshiza kunye nobushushu ukuya ubushushu obuphakathi.
Siziqhekeza iitapile zide zibe zegolide kwaye zibukeke kwaye sizibeke kwisitya esifanelekileyo se-ovenproof, sifafaze intwana yetyuwa (encinci kakhulu) kwaye siyigcine.
Sidlulisa amanqe ngomgubo kunye nefry. Sifuna ukuba zosiwe ngaphandle kodwa zingenziwa ngaphakathi (baya kugqiba ukupheka eziko). Siya kuba nazo malunga Imizuzu ye4 kwicala ngalinye. Sizibeka phezu kweetapile ebesizigcinile.
I-oyile siyicoca ngejagi kwaye songeza i-100 gr / ml (malunga nesiqingatha seglasi) epanini. Siyafudumeza siwucime umlilo. Siphosa ifayile ye- iipepile kwaye uqhube kakuhle. Yongeza amanzi newayini epanini (konke ngomlilo sele ucimile) kwaye uvuselele kakuhle. Yongeza iitapile kunye nekhowudi ngaphezulu. Beka i-piquillo pepper strips phezulu kwaye phakathi kweetapile ukunambitha.
Sitshisa i-oven ukuya 170º (shushu ubushushu naphezulu) kwaye ubhake ikhowudi ukulungiselela Imizuzu ye15.
Iiresiphi zeKrisimesi, Ukupheka kweentlanzi
Igama lam ndingu-Irene, ndineminyaka engama-28 ubudala, ndazalelwa eMadrid kwaye ndinesidanga sokuGuqulela nokuTolika (nangona namhlanje ndisebenza kwilizwe ... Jonga iprofayile>
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izihlandlo ezikhethekileyo » Iiresiphi zeKrisimesi » Cod Portuguese
Iitshokholethi yasekhaya kunye ne-almond nougat, iidessert zeKrisimesi 2
San jacobos, isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo